jeudi, 26 mai 2016 14:26
CFAMA Antsirabe: Nanokatra ny masters I sy II amin'ny Machinisme Agricole
Matotra ny fiaraha-miasa amin'ny CFAMA, na ny « Centre de Formation en Machinisme Agricole », sy ny Oniversitén'Antananarivo. Nosokafana mantsy ankehitriny ny ivontoerana fampianarana ambony an’ity ivontoeram-panofanana ity ho fampianarana ambaratonga ambony ka hamoaka Injeniera amin'izany raha toa ka teknisianina ambony sy « Licence » ihany teo aloha teo. Mpianatra 26 no nisantatra izany, izay noraisina tamin'ireo 38 nahazo ny « Licence en Machinisme Agricole", ny sabotsy 21 mey lasa teo, izay andiany voalohany nivoaka tamin'ny fomba ofisialy. Tokana aty amin'ny faritra Afrika andrefana atsimon'i Saharah sy ny ranomasim-be Indiana ity sampam-piofanana ity raha ny nambaran'Atoa Rakotoson David, Talen'ny CFAMA ka ny Masters I sy II no havoaka amin'ny fiofanana aorian'ny « Licence » ity. Ny Filohan'ny Oniversitén'Antananarivo sy ny Minisitry ny fambolena sy ny fiompiana, Atoa Rivo Rakotovao moa no nanome voninahitra ity lanonana ity. Nandritra ny lanonana moa no nanaovana ny fifanarahan-piarahamiasa teo amin'ny CFAMA sy ny Oniversitén'Antananarivo amin'ny maha ara-panjakana ny fiofanana ka ny CFAMA no hiantoka ny fotodrafitrasa sy ny fanofanana, izay hiarahana amin'ny ireo Japoney sy Malezianina ary ny Oniversité kosa no hiantoka ny maha ara-panjakana ny fampianarana izay atao. Marihina fa azo isaina amin'ny rantsan-tanana sisa ny mba Injeniera amin'ny Machinisme Agricole eto Madagasikara ka zava-dehibe arak’izany ny fisian’izao ivontoerana fanofanana izao eto Antsirabe.
mercredi, 25 mai 2016 14:33
Tahirintsary Sobika Mandritsara
Mandritsara : Milamin-dratsy
Taorian'ny tsy faneken'ny Fokonolona ny hitrandrahan'ireo Sinoa ny harena ankibon'ny tany tao amin'ny Kaominina Ambalakirajy distrikan'ny Mandritsara, ka nangatahan'izy ireo ny fialan'ny lehiben'ny Distrika Mandritsara, dia nivory ny manampahefana rehetra tao antanàna omaly, ka tsy hay nahifika ny vahoaka fa nanome 72 ora ny mpitondra Fanjakana ny analana ireo Sinoa mpitrandraka ireo.
mardi, 24 mai 2016 17:40
Sary Sobika Maromandia
Mikomy ny vahoaka ao Maromandia sy ny ilany avaratra RN6 Distrikan'Analalava
Tsy zakan'ny mponina intsony ny fanararaotana ataon'ny Chef Cantonnement, eau et fôret, avy any Analalava, miampy ny afitsoky ny Chef garde forêt ao Maromandia. Manabotry sy mampahantra vahoaka noho ny fakana vola be amin’ny tsy rariny amin’ny vahoaka mpamboly isan-taona, mitentina hatrany amin'ny 400 000 ariary ka hatramin'ny 1 tapitrisa ariary (2 000 000fmg – 5 000 000fmg).
vendredi, 20 mai 2016 18:36
Mahajanga : Napetraka androany ny samboadin’ny Loholona
Notanterahina io hariva io teo anoloan’ny Lapan'ny tanànan’i Mahajanga, ny lanonana fametrahana ny samboadin’ireo Loholona voafidy sy voatendry avy ao amin’ny faritanin’i Mahajanga. Tamin'ny ora farany no nanambaran'ny Loholon'i Madagasikara Beranto Alexandre, fa atao manoloana ny Lapan'ny tanàna indray ny lanonana fametrahana samboady raha saika natao tao amin'ny Tranoben'ny kolontsaina izany.
Tsenan'Isotry, samy nanangana ny mpivarotra
mercredi, 18 mai 2016 23:55
Sary Bmh cua civisme
Tsena Isotry: Nanorina ny fivarotana avy ny mpivarotra
Taorian'ny fahamaizan'ny Tsenan'ny Tsiafahy Isotry tamin'ny alahady hifoha ny alatsinainy teo, dia tonga teny an-toerana ny Ben'ny Tanàna Lalao Ravalomanana. Teo anatrehan'ny mpivarotra sy ny mpanao gazety maro dia nilaza ampahibemaso izy fa amboarina aingana ny tsena mba hiverenan'ireo mpivarotra hivarotra.